“Cristiano Ronaldo waa dhibaatada ugu weyn ee Dybala ku heysata kooxda Juventus” – Gool FM
(Italy) 20 Abriil 2019. Halyeeyga reer Talyaani ee Andrea Pirlo ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” wuxuu kaga hadlay dhibaatooyinka Paulo Dybala ee xili ciyaareedkan.
Paulo Dybala oo kulamo dhoowr ah daris la noqday xili ciyareedkan ayaa ciyaaray 39 kulan ee ah tartamada oo dhan, isagoo dhaliyey 10 gool, halka sidoo kale uu caawiyay 6 gool kale.
25 jirka reer Argantina ayaa garoomada ka maqanaan doona mudo dhan 20 maalmood, kadib dhaawac kasoo gaaray kulankii Ajax ee lugta hore wareega siddeed dhamaadka tartanka Champions League, waxaana la qorsheenayaa inuu soo laabto 3-da kulan ugu dambeysa ee xili ciyaareedka.
Hadaba Andrea Pirlo oo ka hadlayay dhibaatooyinka Paulo Dybala ee xili ciyaareedkan ayaa wuxuu yiri:
“Qiimaha Dybala ayaa hoos u dhacay, taasina qalad kuma lahan Juventus, waxaan qabaa in dhibaatadu tahay mid maskaxiyan ah, marka aad fursad u heysato inaad la ciyaarto weeraryahan sida Cristiano Ronaldo, waa inaad ku faraxsan tahay inaad la ciyaaro isaga, waa inaad ku faraxsan tahay inaad wax ka barato geesigan weyn”.
“Waa inuu fahmaa Dybala inuu u ciyaarayo kooxda Juventus, isla markaana aysan ahayn koox dhexdhexaad ah, qof walba wuxuu isku dayi doonaa inuu caawiyo, balse ugu dambeyntii wax walba waxay ku xiran tahay, isaga iyo rabitaankiisa inuu ku laabto qaab ciyaareedkiisa ugu fiican”.